EH-NA32PP605 Hair Dryer - Panasonic
nanoe™ ဆံပင်အခြောက်ခံစက် EH-NA32PP605
အပူကာကွယ်မှု စနစ်ဖြင့် nanoe™ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်
အစိုဓာတ်ပြည့်ဝသော nanoe™ က ဆံပင်အခြောက်ခံနေစဉ် ဆံသားကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး တောက်ပြောင်ချောမွေ့စေသည်။ အပူကာကွယ်မှုစနစ်က သင့်ဆံသားနှင့် ဦးရေကို လွန်ကဲသောအပူနှင့် မထိတွေ့အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
လှပသော ဆံပင်နှင့် ကျန်းမာသော ဦးရေပြားအတွက် nanoe™
1. ကျန်းမာ တောက်ပြောင်သော ဆံသားအတွက် nanoe™
အစိုဓာတ် ကြွယ်ဝသော nanoe™အမှုန်များသည် ဆံသားထဲအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အရေပြား အပေါ်ယံလွှာကို တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်နေစေသောကြောင့် သင့်ဆံပင်ကို တောက်ပြောင်၍ ပိုးသားလို နူးညံ့စေကာ ပို၍ ဖီးသင်ရ လွယ်ကူစေသည်။
2. ဦးရေပြားကို သန့်ရှင်းကျန်းမာစေပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းပေးသည်
အစိုဓာတ် ကြွယ်ဝသော nanoe™ သည် သင့်ဦးရေပြားကို ကျန်းမာအောင် အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ဆံသား ပျက်စီးစေသည့် ခြောက်သွေ့မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
3. တည်ငြိမ် လျှပ်စစ်ကို ချုပ်နှောင်ထားပြီး ဆံသားကို တည်ငြိမ်စေသည်*
nanoe™ သည် အဖိုဓာတ်ကို ပျက်စီးစေပြီး ဆံသားကို တည်ငြိမ်စေသည်။
သင့်ဆံပင်ကို လွန်ကဲသော အပူနှင့် မထိမိစေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်တင့်သော အပူချိန်တွင် အားကောင်းသော လေမှုတ်အားရရှိအောင် သေချာဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက် ဆံသားနှင့် ဦးရေအား အပူကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Panasonic ၏ ပြိုင်ဘက်ကင်း အမြန်ခြောက်စေသော လေမှုတ်ခေါင်းသည် ဆံသားမျှင်များကို ရှင်းလင်းပေးမည့် ခိုင်မာ ပျော့ပျောင်းသော လေမှုတ်အားကို ထုတ်လုပ်ကာ ၎င်းမှ ထွက်လာသော လေနှင့် ထိသည့်နေရာကို မြန်ဆန်စွာ ခြောက်သွေ့စေသည်။
ကောင်းမွန်သော လေကောင်းလေသန့်သည် ဆံသား ခြောက်သွေ့ခြင်းကို လျင်မြန်စေသည်
ဆံသားကို အလျင်အမြန် ခြောက်စေသည့်အခါ လေထုသည် တစ်ခုတည်းသောအရာ မဟုတ်ပါ။ လေထု၊ လေ အပူချိန်၊ လေဖိအားနှင့် လေတိုက်သည့် လမ်းကြောင်းအားလုံးက အရေးကြီးသည်။ Panasonic ၏ nanoe™ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်များသည် သင့်ဆံပင်ကို လျင်မြန်စွာ၊ ညင်သာစွာ၊ လှပစွာ ခြောက်သွားစေရန် ဤလေးချက်ကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။
စမ်းသပ် သုံးစွဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ပြီးမှ အသုံးပြုသူနှင့် ကိုက်ညီမည့် ဒီဇိုင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေအံဝင်ခွင်ကျသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်သော်လည်း လှပသည့် ပုံစံဖြင့် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ဆွဲအား၏ အလယ်နှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို ဂရုတစိုက် အာရုံစိုက်၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အမြန်နှုန်း2မျိုး၊ အပူချိန်3မျိုးဖြင့် ဆက်တင်များ
လက်ကိုင်ကို ခေါက်နိုင်သောကြောင့် အသုံးမပြုသည့်အခါ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အဆင်ပြေပြေနှင့် ကျစ်လစ်စွာ သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
nanoe™ for healthy and shiny hair
nanoe™ - ဆံသား လှပမှုအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု | Panasonic Beauty
အလွန် ကျန်းမာ သန်စွမ်းသည့် ဆံသားနှင့် ဦးရေပြားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အဆပေါင်း 1000 အစိုဓာတ် ဖြည့်ပေးမည့် ထိရောက်သော အိုင်ယွန် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်။